Lee Byung-joon – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Memoir ofaMurderer (2017) Unicode Memoir of murderer ရုပ်ရှင်ကားလေးဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာကိုရီးယားဒါရိုက်တာ Won Shin Yun ဖန်တီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကားကို စာရေးဆရာ Kim Yong Ha ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဝတ္တုစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့A murderer’s guide to memorizarion ကို မှီငြမ်းပြီးရုပ်ရှင်အဖြစ် ဖန်တီးထားတာပါ။ အဓိက ဇာတ်ဆောင်များအနေနဲ့Sol Kyun Gul နဲ့ Kim Nam Gil ၊ ဇာတ်ပို့အဖြစ် Kim Seol hyun နဲ့Oh Dal Su တို့က ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ Showbox/Mediaplex မှထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးထားပြီး ဇာတ်လမ်းကို မိနစ်ပေါင်း ၁၂၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရင်သတ်ရှုမောခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Sol Kyun Gul ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရတဲ့စိတ္တဇလူသတ်သမား တရားခံ Serial Killer ကြီးKim Byeong Soo အဖြစ် ...
The Divine Move 2: The Wrathful (2019) Unicode The Divine Move က 2014 မှာ ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်…မင်းသားကြီး Woo-sung Jung ကအဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဂိုကစားနည်းကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ တော်တော်များများကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်… အခု ၂၀၁၉ မှာ ထွက်တဲ့ The Divine Move2ဟာ 1 နဲ့ ဆက်စပ်မှုတော့သိပ်မရှိလှပါဘူး.. သို့ပေမယ် ဂိုကစားနည်းနဲ့ပဲ ဇာတ်အိမ်ကိုအခြေပြုထားတယ်…အရင်ကားထက်တောင် အက်ရှင်ခန်းတွေပိုများလာသလို Fight Scene တွေလည်းပိုမိုက်လာတယ်…. အားနေ ချနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဇာတ်လမ်းသွားကလည်းအတော်ကောင်းပါတယ်.. သတ်ဖြတ်ခန်းတွေ ဓားနဲ့ထိုးတာတွေ အရိုးတွေချိုးတွေ တော်တော်ကြီးကိုပီပြင်တယ်… Spoiler ဖြစ်မှာ စိုးလို့ ဒီလောက်ပဲပြောပါရစေ…. ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်…ဒေါင်းကြည့်လို့ ခင်ဗျားတို့ နောင်တလုံး၀မရစေရဘူး… Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Nyi Nyi ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi The Divine Move က 2014 မွာ ထြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္…မင္းသားႀကီး Woo-sung Jung ကအဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဂိုကစားနည္းကိုအေျခခံထားတဲ့ဒီဇာတ္ကားဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတယ္… အခု ၂၀၁၉ မွာ ထြက္တဲ့ The Divine Move2ဟာ 1 ...